News - မည်သည့်ပလပ်စတစ်မှန်များမှ Glass Mirror ကိုနေရာအနှံ့အပြားတွင်ပုံပျက်။ အစားထိုးနိုင်သနည်း။
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပစ္စည်းများ၏အခြေခံဝိသေသလက္ခဏာများကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်:
၁။ Acrylic မှန် (Acrylic, Plexiglass, PMMA, Polymethyl Methacrylate)
အားသာချက် - ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမြင့်မားခြင်း၊ မှန်မျက်နှာပြင်သည်ဆန့်ကျင်ဘက်ရှိခြင်း၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုရှိသောကောင်းမွန်သောကာကွယ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှု၊ သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း (ဖန်ခွက်မှန်များထက် ၁၇ x ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်) နှင့်ပျက်စီးခြင်း၊ ပေါ့ပါးခြင်း၊
ဆိုးကျိုး - အနည်းငယ်ဆတ်ဆတ်
2. PVC ပလပ်စတစ်မှန်
အားသာချက်: စျေးပေါ; မြင့်မားသောမာကျောမှု; ဖြတ်ခြင်းနှင့်ပုံသဏ္intoာန်သို့ငုံ့နိုင်ပါသည်
ဆိုးကျိုး - အခြေခံပစ္စည်းသည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိ၊ မှန်မျက်နှာပြင်သည်ရှေ့မှောက်၌သာနိမ့်ကျပြီးအနိမ့်အမြင့်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်
၃။ Polystyrene မှန် (PS မှန်)
4. Polycarbonate မှန် (PC မှန်)
အလတ်စားပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ ကောင်းမွန်သောမာကျောမှု (ဖန်ခွက်ထက်အဆ ၂၅၀ ပိုမိုခိုင်ခံ့မှု၊ acrylic ထက်အဆ ၃၀ ပိုမိုအားကောင်းသည်) ရှိသော်လည်းစျေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးရှိခြင်း။
အားသာချက် - ရင့်ကျက်သောအပေါ်ယံလွှာ၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအရည်အသွေး၊ စျေးနှုန်းချိုသာမှု၊
ဆိုးကျိုး - ထိခိုက်လွယ်မှု၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုနည်းသော၊ ထိခိုက်မှုနည်းသော၊
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော်ပြီးပြည့်စုံသောအစားထိုးပုံသေဖြစ်ရန်မလွယ်ကူ၊ ပေါ့ပါး။ ကျိုးပဲ့ခံရမည်ကိုမကြောက်တတ်သည့် acrylic ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ တွင်းထွက်ဖန်အစားထိုးပစ္စည်းအဖြစ် Acrylic plexiglass မှန်ကိုအသုံးပြုရန်အကြောင်းပြချက်အနည်းငယ်ရှိသည်။
●သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည် - Acrylic သည်ဖန်ထည်ထက်သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ပျက်စီးမှုရှိပါက acrylic သည်သေးငယ်သောအပိုင်းများသို့မကျိုးပဲ့ဘဲကွဲသွားပါလိမ့်မည်။ acrylic စာရွက်များကိုဖန်လုံအိမ်ပလပ်စတစ်၊ ပြဇာတ်ရုံပြတင်းပေါက်များ၊ ပြတင်းပေါက်များ၊ perspex ကြေးမုံကဲ့သို့သုံးနိုင်သည်
●အလင်းထုတ်လွှင့်မှု - Acrylic စာရွက်များသည်အလင်း ၉၂% အထိထုတ်လွှတ်သည်။ ဖန်သည်အလင်း ၈၀ မှ ၉၀% သာထုတ်နိုင်သည်။ crystal ကဲ့သို့ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး acrylic စာရွက်များသည်အကောင်းဆုံးဖန်များထက်အလင်းကိုပိုမိုထုတ်လွှင့်သည်။
●ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင် - Acrylic သည်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အတူပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောပလပ်စတစ်အစားထိုးဖြစ်သည်။ acrylic စာရွက်များထုတ်လုပ်ပြီးနောက်, သူတို့တစ် ဦး ဖျက်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်၌, acrylic စာရွက်များကြိတ်ခွဲပြီးနောက်အရည်ရည်သို့ re- အရည်ပျော်မတိုင်မီအပူ။ လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်နှင့်အသစ်စာရွက်များပြုလုပ်နိုင်သည်။
●ခရမ်းလွန်ခုခံခြင်း - အပြင်ဘက်တွင်အက်ရီလစ်စာရွက်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်မြင့်မားသောခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်) ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ acrylic စာရွက်များကိုခရမ်းလွန် filter ဖြင့်လည်းရရှိနိုင်သည်။
●ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း - အကယ်၍ သင်သည်ဘတ်ဂျက်ကိုသတိထားမိသူတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်၊ acrylic စာရွက်များသည်ဖန်ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်စီးပွားရေးအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိရ။ သင် ၀ မ်းသာနိုင်သည်။ acrylic စာရွက်ဖန်၏ကုန်ကျစရိတ်၏ထက်ဝက်ခန့်တွင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ဤပလပ်စတစ်ပြားများသည်အလေးချိန်ပိုမိုပေါ့ပါးပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်လွယ်ကူသဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်းသက်သာစေသည်။
●အလွယ်တကူ လုပ်၍ ပုံဖော်နိုင်သည် - Acrylic စာရွက်များသည်ကောင်းမွန်သောပုံသွင်ပြင်ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ ၁၀၀ ဒီဂရီအထိအပူပေးသောအခါပုလင်းများ၊ ဓာတ်ပုံဘောင်များနှင့်ပြွန်များအပါအ ၀ င်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုအလွယ်တကူပုံသွင်းနိုင်သည်။ အေးသည်နှင့် acrylic သည်ဖွဲ့စည်းထားသောပုံသဏ္toာန်ကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
●ပေါ့ပါးခြင်း - Acrylic သည်ဖန်ခွက်ထက်အလေးချိန် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုနည်းသောကြောင့်ကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူစေသည်။ ဖန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် acrylic စာရွက်များသည်အလွန်ပေါ့ပါးပြီးတစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့အလွယ်တကူသယ်ဆောင်နိုင်သည်။
●ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကဲ့သို့သောဖန်ခွက် - Acrylic သည်၎င်း၏ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီးကြာရှည်စွာပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။ ၎င်း၏ကြာရှည်ခံမှုနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုတို့ကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးသမားအများစုသည်ပြတင်းပေါက်များ၊ ဖန်လုံအိမ်များ၊ မိုးမျှော်အိမ်များနှင့်စတိုးဆိုင်ရှေ့မျက်နှာစာများအတွက်အသုံးပြုရန် acrylic စာရွက်များကိုရွေးချယ်ရန်ပိုနှစ်သက်ကြသည်။
●လုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့်အားသာချက် - သင်သာလွန်သောအားသာချက်ပြတင်းပေါက်များလိုချင်သည့်အကြောင်းရင်းများစွာရှိနိုင်သည်။ သငျသညျလုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဒါမှမဟုတ်ရာသီဥတုခုခံဘို့လိုချင်တာဖြစ်စေ။ Acrylic စာရွက်များသည်ဖန်ခွက်ထက် ၁၇ ဆပိုမိုအားကောင်းသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည် shatterproof acrylic ကိုပိုမိုအင်အားသုံးစေသည်။ ဤစာရွက်များအားတစ်ချိန်တည်းတွင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ လုံခြုံမှုနှင့်ခွန်အားကိုပေးစွမ်းနိုင်ရန်အတွက်ဖန်ခွက်ကိုအစားထိုးခြင်းကဲ့သို့ကြီးကျယ်ခမ်းနားစေရန်ပြုလုပ်ထားသည်
နှစ်များတစ်လျှောက် acrylic sheeting အသုံးပြုခြင်းသည်ဘက်စုံသုံးခြင်းနှင့်ဘက်ပေါင်းစုံအသုံးပြုခြင်းတို့ကြောင့်ဖန်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။